ZoneCoin စျေး - အွန်လိုင်း ZNE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ZoneCoin (ZNE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ZoneCoin (ZNE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ZoneCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
ZNE – ZoneCoin
Market ကဦးထုပ်: $25 297.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ZoneCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ZoneCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ZoneCoinZNE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000737ZoneCoinZNE သို့ ယူရိုEUR€0.000628ZoneCoinZNE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000565ZoneCoinZNE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000677ZoneCoinZNE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00665ZoneCoinZNE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00468ZoneCoinZNE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0164ZoneCoinZNE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00277ZoneCoinZNE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000982ZoneCoinZNE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00103ZoneCoinZNE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0165ZoneCoinZNE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00571ZoneCoinZNE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00396ZoneCoinZNE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0551ZoneCoinZNE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.125ZoneCoinZNE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00101ZoneCoinZNE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00113ZoneCoinZNE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0229ZoneCoinZNE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00512ZoneCoinZNE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0786ZoneCoinZNE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.874ZoneCoinZNE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.286ZoneCoinZNE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0541ZoneCoinZNE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0204
ZoneCoinZNE သို့ BitcoinBTC0.00000007 ZoneCoinZNE သို့ EthereumETH0.000002 ZoneCoinZNE သို့ LitecoinLTC0.00001 ZoneCoinZNE သို့ DigitalCashDASH0.000009 ZoneCoinZNE သို့ MoneroXMR0.000009 ZoneCoinZNE သို့ NxtNXT0.0609 ZoneCoinZNE သို့ Ethereum ClassicETC0.000111 ZoneCoinZNE သို့ DogecoinDOGE0.218 ZoneCoinZNE သို့ ZCashZEC0.000009 ZoneCoinZNE သို့ BitsharesBTS0.0289 ZoneCoinZNE သို့ DigiByteDGB0.0252 ZoneCoinZNE သို့ RippleXRP0.00266 ZoneCoinZNE သို့ BitcoinDarkBTCD0.00003 ZoneCoinZNE သို့ PeerCoinPPC0.00248 ZoneCoinZNE သို့ CraigsCoinCRAIG0.343 ZoneCoinZNE သို့ BitstakeXBS0.0321 ZoneCoinZNE သို့ PayCoinXPY0.0131 ZoneCoinZNE သို့ ProsperCoinPRC0.0944 ZoneCoinZNE သို့ YbCoinYBC0.0000004 ZoneCoinZNE သို့ DarkKushDANK0.241 ZoneCoinZNE သို့ GiveCoinGIVE1.63 ZoneCoinZNE သို့ KoboCoinKOBO0.171 ZoneCoinZNE သို့ DarkTokenDT0.000679 ZoneCoinZNE သို့ CETUS CoinCETI2.17
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 06:25:02 +0000.